Iflethi okanye indlu ekwicomplex ephandle embindini weFinäsdalen eqeshisayo! - I-Airbnb
Iflethi okanye indlu ekwicomplex ephandle embindini weFinäsdalen eqeshisayo!
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguPer-Åke
Wamkelekile kule flethi okanye indlu ekwicomplex epholileyo nentsha kangangeemitha ezintathu ukusuka kwindawo entle yokutyibiliza ekhephini yaseFinäsdalen kunye neemitha eziyi-10 ukusuka eFinäsdalssjön. Iflethi okanye indlu ekwicomplex enezikwere eziyi-58 inegumbi lokuhlala, igumbi lokulala elinye elinesiqingatha, ikhitshi elinento yonke kunye nendlu yangasese ecocekileyo eneshawa, umatshini wokuhlamba nowokomisa impahla. Iflethi isembindini weFinäsdalen ibe ikufuphi, phakathi kwezinye izinto, ivenkile yokutya, iivenkile zokutyela kunye neGondolen. Ikhaya elilungele abo bathanda ihlabathi lentaba nobomi bangaphandle!
Iflethi ikumgangatho osezantsi kwaye inegumbi lokuhlala elinesofa ekwayibhedi, isitulo esinamavili, iTV netafile yokutyela enendawo yabantu abane negumbi elikhulu elinamagumbi amabini. Kula magumbi mabini uza kufumana umbono omangalisayo weFinsdalssjön, umkhondo wokutyibilika ekhephini kunye neSkarvarna. Kwiflethi, kukho nelinye igumbi elincinci elinebhedi encinci. Kodwa ke, eli gumbi lincinci kakhulu ibe kukho ibhedi enye kuphela kule ndawo yaye akukho festile.
Ikhitshi linefriji, i-deep freezer, umatshini wokuhlamba izitya, isitovu, ioveni, i-microwave, ikofu kunye neketile yeti kunye ne-toaster. Ivulekile phakathi kwekhitshi negumbi lokuhlala elenza ikhanye kakuhle iflethi okanye indlu ekwicomplex. Indlu yangasese icoceke kakhulu ibe kukho neshawa, umatshini wokuhlamba nowokomisa impahla.
Ukusuka kwigumbi lokuhlala kunye nekhitshi, umnyango weveranda ukusa ngqo kumzila wokutyibiliza ekhephini ojikeleze ichibi.
Imiqamelo needuvethi ziqukiwe kodwa kungekhona amashiti neetawuli.
Iflethi isembindini weFunäsdalen apho unokufumana iivenkile zokutyela eziliqela, iikhefi, iivenkile ezimbini zokutya kunye nomphakathi, iimpahla kunye neevenkile zemidlalo. E-Finäsdalen kukho nantoni na eyenkcubeko yemyuziyam yase-Härjedalen. Kwakhona iivenkile zotywala, amayeza kunye neendawo zokudlala i-bowling ziyafumaneka.
Izinto eziluncedo eziphambili zikaFunäsdalen yindawo yabo yangaphandle. Kunamathuba okuqesha amaqithi-qithi, unyuke iintaba ezintle, uhamba ngebhayisekile okanye unyuke intaba. Imoto emfutshane iza kukusa, ngokomzekelo, eKläppen, eLjungdalen apho ungathatha khona uhambo losuku oluya eHelags, 17 sqm. Ngaphezu kwako konke, i-Funäsdalen yindawo yokutyibiliza ekhephini! Kukho eyona nkqubo inde yehlabathi yokuwela ilizwe enamakhilomitha ayi-30 alungiselelwe kokubini ukutyibiliza emkhenkceni kwaye unethuba lokuhla kumathambeka ahlulwe abe ngamaziko amahlanu ekutyibilikeni ekhephini. I-gondola ekwenza uphezulu kwi-Funäsdalsberget ikumgama weemitha eziyi-200 kuphela ukusuka kwiflethi okanye kwindlu ekwicomplex.
Umbuki zindwendwe ngu- Per-Åke
Njengababuki zindwendwe, asizukuhlala eFinäsdalen ngexesha elinye nawe.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Härjedalen V